Jiilka saddexaad ee AirPods ayaa la bilaabi karaa Sebtember 30 | Waxaan ka imid mac
Waxaan wada ognahay in hadda qoob -ka -ciyaarka taariikhaha loogu talagalay furaha muhiimka ah iyo soo -saarka dambe ee alaabada Apple ay noqon doonto midda ugu muhiimsan dhammaadka Ogosto iyo horraanta Sebtember. Dhab ahaantii taariikhaha soo -bandhigidda badeecadaha iyo bilawga dambe waxay geli doonaan bisha soo socota gudaheeda laakiin ilaa ay si rasmi ah u xaqiijiyaan in dhowr goobood dhigaan "khamaarkooda".
Xaaladdan oo kale, websaydhka Shiinaha ee IT Home wuxuu helay sawir muujinaya dhowr taariikho oo la bilaabay labada iPhone 13 iyo jiilka saddexaad ee AirPods. Marka laga hadlayo iPhone -ka waxaad arki kartaa taariikhda Sebtember 17 inay tahay taariikhda la bilaabay iyo AirPods 30 -ka isla bishaas.
Jiilka saddexaad AirPods ayaa imaan kara Sebtember 30
Uma maleyneyno in 30ka Sebtember ay tahay taariikh waali ah laakiin sidoo kale ma jirto wax si rasmi ah loo xaqiijiyey sidoo kale waxaan la yaabnay in bilaabista iPhone ay ka duwan tahay tan AirPods markan. Si kastaba xaalku ha ahaadee, waxaa lagama maarmaan noqon doonta in loo dulqaato wararkaas xanta ah oo la arko nolol maalmeedkooda, mar haddii tan “qoob-ka-ciyaarka taariikhaha” ay noqon doonto mid caadi ah wixii hadda ka dambeeya.
Warbaahinta qaar ayaa tilmaamtay in jiilka saddexaad ee AirPods ay si madaxbannaan u imaan karaan dhacdo dibadeed ama xitaa iyada oo aan dhacdo, iyagoo si toos ah ugu dhawaaqaya sheyga websaydhka Apple sida dhacday waqtiyadii hore. Waxaan durbaba sugeynaa dhacdada ka dib xagaaga oo ay ka buuxaan xanta iyo daadinta nooc kasta, waxaan rajeyneynaa in Apple ay bilaabi doonto dhowr badeeco ka hor dhammaadka sanadka oo ay ka mid yihiin kuwan Jiilka saddexaad ee AirPods oo leh isbeddel naqshadeynta ayaa lagu daray.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Apple » Xanta » Jiilka saddexaad AirPods ayaa bilaabi kara Sebtember 30